विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे पिपिए खुलाउँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे पिपिए खुलाउँदै
जेठ २९, २०७५ 3972 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपछि त्यो सीमा लक्षित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (लिउ या तिर) प्रावधानको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले स्वेतपत्रमार्फत निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘आगामी दशक ऊर्जा दशक’ नारा दिएर ल्याइएको स्वयतपत्रको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न ३०-३५ प्रतिशत जलाशय, २५-३० अर्धजलाशय, ३०- ३५ प्रतिशत नदी प्रवाही र ५-१० प्रतिशत वैकलीपक स्रोतबाट विद्युत उत्पादन हुने विद्युतको पिपिए खुलाउन लागिएको हो ।
ऊर्जा दशक अवधिमा विद्युत उत्पादनको सीमा १५ हजार पुर्याएर १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा ५ हजार भारत बंगालादेशलगायत मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
टेक अर पे खुलेपछि पिपिए गर्न लाइनमा बसेका दर्जनौं आयोजनाले राहत पाउने छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब ३ हजार ६ सय मेगावाट नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यसअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने ‘बेन्चमार्क (सीमा)’ भित्र रहेर पिपिए हुँदै आएको थियो ।
उक्त ‘बेन्चमार्क’ भित्र नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिएको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले टेक अर पे प्रावधान बन्द गरेको थियो । अब १५ हजार मेगावाटभित्र ३० देखि ३५ प्रतिशत नदी प्रवाही गणना गर्दा ४ हजार ५ सय देखि ५ हजार २ सय ५० मेगावाट हुन्छ । अब प्राधिकरणले यो सीमासम्म टेक अर पे पिपिए गर्नेछ ।
२०७२ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा जलाशय र अर्धजलाशय बाहेक नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा पुगिसकेको थियो । यसमा नदी प्रवाही आयोजना २५ देखि ३० प्रतिशत राखिएको थियो ।
अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको टेक अर पे पिपिए बढाएका थिए । उनले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए ।